IINGCAMANGO EZI-39 EZINTLE ZEGAZEBO (IPATIO YANGAPHANDLE KUNYE NOYILO LWEGADI) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Iingcamango ezi-39 ezintle zeGazebo (iPatio yangaphandle kunye noYilo lweGadi)
Iingcamango ezi-39 ezintle zeGazebo (iPatio yangaphandle kunye noYilo lweGadi)
Igalari ibonisa imifanekiso yeengcamango ze-gazebo zokwenza indawo efanelekileyo yokubuyela umva. Ngeentlobo ngeentlobo zezitayile kubandakanya i-octagon yemveli ye-gazebo, izitayile zeveranda ezigqunyiweyo, kunye nee-gazebos zangoku ngaphezulu kwamachibi okudada, zininzi izimvo zokuphefumlelwa zoyilo. Ukongeza i-gazebo ngasemva kwekhaya lakho kuyindlela entle yokuphucula ukubonakala kwayo kwaye unike usapho kunye nabahlobo bakho indawo entle yokuphumla kunye nengxoxo.
I-vinyl octagon gazebo eboniswe kumfanekiso ongentla ineenyawo ezili-12 ububanzi. Iithayile ze-shingle kunye ne-rooster yemozulu yokunyuka kwemozulu ine-antique yakudala ekhangeleka kudala umtsalane wasekhaya kunye ne-rustic ogqibeleleyo kule ndawo yangasemva kwethayile yelitye kunye nokusekwa kwephuli. Beka kancinci ngaphezulu kwedama lokubhukuda elinebhulorho encinci yamaplanga ngaphezulu kwento eyakhiwe ngamatye omlambo, yenza indawo enomtsalane kule ndawo ingasemva.
Iingcamango zangasemva kweGazebo
Iingcinga zeDekk Gazebo
Izimvo zangaphandle zePatio Gazebo
Iindlela ezibekiweyo zamatye ezinqumla ingca eluhlaza yale yangasemva zikhokelela kwi-gazebo enkulu kolu luyilo. Isebenza njengegumbi lokuphumla elingaphandle kunye nezindlu ezithandwayo ezithengisa ifenitshala yangaphandle.
Iindidi ezahlukeneyo zeGazebos zeKhaya lakho
Umxholo wolwandle imihombiso yeshawari yokuhombisa
IGazebos lulongezo olugqibeleleyo ngaphandle. Ayongezi kuphela kwi-aesthetics yoyilo yegadi yakho kodwa ikwabonelela ngendawo yokuhlala eyimfuneko kunye nendawo yokuhlala xa kufuneka njalo. Ke ukuba impelaveki igcwele kukudibana kosapho kunye namaqela angaphandle nabahlobo bakho yile nto uyicwangcisayo, i-gazebo eyadini yakho iyanceda.
IGazebos ibiyinxalenye yamakhaya ukususela kumaxesha amandulo. Yenziwe ngezinto ezahlukeneyo ezinjengomthi, isinyithi, isinyithi kunye nevinyl, iiGazebos zakhiwe ngokulula kakhulu kumaxesha anamhlanje. Zakhiwe ngobuchule kuyilo oluninzi oluphefumlelweyo ukusuka kwizimbo zokwakha zamazwe kwihlabathi liphela.
Ukusuka kwi-gazebos ezimeleyo ukuya kwezi ziqhotyoshelwe kwisakhiwo esikhulu, i-gazebos inokwakhiwa ngeendlela ezahlukeneyo kuxhomekeke ekusetyenzisweni kwayo kunye nokufumaneka kwendawo. Nalu uluhlu olukhethiweyo lweentlobo ezithandwa kakhulu kwiifashthi ze-gazebo ezisetyenziselwa ukulungiswa kwemyezo yegadi, nganye inokusebenza kwayo kunye nokusetyenziswa kokuhlobisa.
UVictorian gazebos : UVictorian gazebos uphatha umtsalane weklasikhi. Into esihlala siyibona ngeso lengqondo xa sisiva igama elithi 'gazebo' sisimbo esimhlophe saseVictoria esimhlophe esenziwe ngentsimbi ebunjiweyo eneenkcukacha, iziporo, iziphelo kunye nobushushu. I-gazebo yase-Victori kwipatio yakho iyonwabile ngakumbi xa unemibala eluhlaza. I-gazebos yama-Victorian ithandwa kakhulu kuba zongeza isuntswana elifanelekileyo lomtsalane weklasikhi ngaphandle.
IRustic gazebos Rustic gazebos zihlala zenziwe ngeenkuni ezindala kunye nezisetyenzisiweyo. Uyilo lwe-gazebo yaseRustic lubukeka ngokwendalo ngeentsika zomthi ezingagqitywanga kunye nocwangciso lophahla. Zenziwe ngeemilo ezininzi kunye nobukhulu ngokuxhomekeke ekusetyenzisweni kwazo. Nangona ingenakhonkrithi kakhulu kwimbonakalo efana nezinye i-gazebos, iRustic yeplanga yegazebos inokuphuculwa ngezibane, izityalo kunye namakhethini ukuyenza ibe sisimo esifanelekileyo kubusuku bakho be-barbecue yehlobo kunye nabantu obathandayo.
I-gazebos yaseMpuma : Kukhuthazwe zizakhiwo zaseAsia, ii-gazebos zaseMpuma zongeza ilungelo lesibheno se-zen ngaphandle. I-gazebos yaseMpuma inokuba lula kwaye incinci ngemigca ecocekileyo xa yakhiwe ngendlela yangoku. I-gazebos yesiko laseMpuma ithwala izinto ezintsonkothileyo zemibala kunye nemibala eqaqambileyo.
IPergola gazebos : I-Pergolas ziyi-gazebos ezenziwe ngomthi zihlala zinophahla lwe-lattice. I-Pergolas ineentsika ezomeleleyo nezilula apho uphahla, oluvulekileyo ikakhulu, luxhaswa khona. Olu hlobo lwe-gazebo lusetyenziselwa ukukhulisa abakhweli kunye nemidiliya ecaleni kweentsika, zilungele iigadi kunye nengca efuna indawo yokuhlala enomthunzi. Kulula ukwakha ngezinto ezinokuyilwa ezincinci, ii-pergolas zomelele kwaye zisebenza kakhulu.
Ngobudenge iGazebos : Eyona intle phakathi kweqashiso, ii-gazebos zobuyatha zihombisile. Ngamaxesha amandulo, ezi ntlobo zegazebos zazakhiwe kumhlaba obabazekayo weenjongo zokuhombisa. Uhlobo oluqhelekileyo lwee-gazebos zobuyatha zenziwe ngentsimbi eyenziwe ngepeyinti kwaye zipeyintwe ezimhlophe. Ngobungakanani bayo obaneleyo kunye nokubukeka okuethe-ethe, i-gazebos yobudenge ngokuqinisekileyo yongezwa kakuhle kuyo nayiphi na indawo engaphandle. Tyala iibhedi zakho zeentyatyambo kwi-gazebo yobudenge okanye usete iibhentshi ezincinci ukubonelela ngendawo yokuhlala abantwana nezilwanyana zasekhaya kwindawo yakho yegadi.
Le patio yetropiki isebenzisa i-gazebo ye-octagon gazebo efudumeleyo kwaye engenakuphikwa enobude obuziimitha ezili-12 ububanzi. Umgangatho ongaphandle weplanga apho le gazebo ixhomekeke kuwo ukhokelela echibini elingaphandle.
Ukusekwa kwesitayile esihle seMeditera kubandakanya ipatio yangaphandle egutyungelwe yintsika ye-gazebo. Ipatio ikwayindawo yokupheka ngaphandle. Konke oku kukubi echibini lomntu kunye nezinto ezahlukeneyo zomhlaba kuyilo lwasemva kwendlu.
Inkangeleko ye-Neo-classical yentsika ye-gazebo kulo mzekelo iphinda iphuculwe yifom ye-concave engagungqiyo yophahla lwentsimbi. Igadi yasemva kwezindlu inezitena kunye nezityalo eziluhlaza ezihamba kakuhle kakhulu kunye ne-gazebo eyakhiweyo.
Igadi engasemva kwendlu yayiqeshe isitayile saseAsia, sen esiboniswa nakwigazebo yayo. Isakhiwo esincinci somthi esineenkuni sinophahla olujikayo, iintsika zomthi, kunye neziporo zomthi eziluhlaza ezibonakalayo ezibonakalayo kuyilo lwaseAsia.
Le patio yangasemva ine-gazebo yamatye edlala imidlalo kwisitayile esiphakathi kwePalladian kunye neClassical. Iikholamu ze-squat zeDoric ezibambe iingqukuva zamatye zinemigangatho eluhlaza, enomtsalane kubo eyenza ukuba indawo izive ikhuselekile kwaye isekhaya.
Le ngasemva isebenzisa izibane zangaphandle ezizodwa kunye noyilo lokuhombisa umhlaba ukwenza i-gazebo yayo yokhuni ibonakale. I-gazebo ngokwayo iyadlala udonga lwangasemva olwenziwe ngesitayile esinesakhelo esenziwe ngefestile kunye neebhodi zomthi ezingwevu.
ngubani uvanessa bryant ukuthandana
Lo mzekelo wangoku kunye nomncinci wesakhiwo se-porcela esigqunywe ngevaranda sisebenzisa ubukhulu be-squat, i-pristine yamatye amhlophe, kunye nezinto zangoku zoxande kunye nezikwere zoyilo ukufikelela kwisiteyitimenti esihle kodwa esilula ngokulula.
Ukuhonjiswa ligama lomdlalo wale gazebo yesiko. Njengokutshatisa igadi ebunjiweyo entle kunye neheji ezijikelezileyo, imidlalo ye-gazebo eqingqiweyo yamatye, uphahla olumhlophe olwenziwe ngentsimbi, kunye nophahla lwamatye akhelwe ngaphakathi ahambelana nobume besetyhula yolwakhiwo.
Iyafana kakhulu nomzekelo ngaphambili ngaphandle kokuphakama kwengqondo yayo yokuziva ubunzulu kunye nokuziva okuphezulu. Isebenzisa iintsika zamatye, iibhentshi zamatye ezakhelweyo, kunye nepeyinti eyenziwe ngentsimbi eyintsonkothileyo. Ukusetyenziswa kokuhombisa umhlaba kule ndawo yangasemva kuthotyiwe ngakumbi kodwa kusesekuhle.
Le gadi ye-gazebo yezemidlalo ipeyintiwe ngomthi wompayini, imidiliya enyukayo entle, kunye nobubanzi obuziinyawo ezili-10 ezinendawo eyaneleyo yokubanendawo yokuhlala yabantu bonwabele umyezo.
Uyilo lwetropiki lisebenzisa ngokukhululekileyo iintlobo ezahlukeneyo zeentyatyambo zomhlaba. Indlela eya kwipilar pergola iyahamba, idlula kwindawo yamanzi kunye nezinye izinto ezintle zomhlaba, kwaye iphela ngezitepsi ezikhokelela kwindawo yokuhlala.
Isitayile seTuscan esine-hexagonal gazebo sisebenzisa iikholamu zelitye elingqindilili zeDoric, uphahla olukhulu lwesquat, kunye nemvelaphi ehlelweyo enezinto ezincinci kodwa ezinesitayile sokusebenzisa izityalo kunye namatyholo.
Ukugqitywa komsedare kule midlalo ye-oktagon ye-octagon ye-octagon ye-varnish ehambelana nale ndawo iphakanyisiweyo yangaphandle yomthi eyakhelwe kuyo. Oku kubekwa kwikona kunika abasebenzisi umbono olungileyo wengca eluhlaza ngasemva kodwa uzidibanisa kakuhle kumgangatho wepikniki.
I-gazebo emhlophe epeyintiweyo ifana nokucoceka kunye nokucoceka kokuziva kwendawo esemva kwendlu. I-grey shingles yaphula ukubonwa kunye ne-aesthetic monotony ngelixa uyinika ukubonakala kwesitayile. Ukuhlala kuseti kwi-gazebo kunika abasebenzisi indawo yokuphumla kunye nengxoxo emnandi yangaphandle.
Lo mgangatho weenkuni uphindaphindwe njenge-spa yangaphandle, kunye nebhafu engezantsi ebhafini eshushu ebekwe kwindawo yayo. Kwikona yomgangatho ophakamileyo, sine-gazebo eyenziwe ngomthi, enezitulo zangaphandle kwaye isebenza njengendawo efudumeleyo yokuhlala kunye nokuntywila ngaphandle.
Uyilo lwechibi lunika ithuba elifanelekileyo lokuza nemibono ye-gazebo. Iindawo ezinamachibi asecaleni kwechibi ezinje ngale yindawo yokuphatha kunye nokuzonwabisa. I-gazebo yamaplanga kule deck isethwe phakathi kwendlu yesikhephe kunye ne-lounge swing. Indawo yokuhlala inika abasebenzisi indawo yokuphumla kunye nokuxabisa umbono wechibi.
Ikrisimesi izimvo ezikhoyo ngomfazi
Iigazethi zentsimbi kumanqwanqwa eenkuni zihlala zihanjiswa. I-Gazebos efana nale iluncedo kubanini bamakhaya abakhetha indawo eziguqukayo neziguqukayo. Igazebo yentsimbi esetyenzisiweyo inee-canopy shades ezikhusela ifanitshala yangaphandle kwizinto.
Le gazebo yomgangatho yakhiwe ngeepali ezinkulu zomthi ezinoyilo oluphezulu lwesilingi. Uphahla lwakhiwe ngeethayile. Vula izimvo ze-gazebo ezinje ngale ndlela zinika ubhetyebhetye kunye negumbi lokuzisa iitafile ezininzi kunye nezitulo zentlanganiso.
I-gazebo evulekileyo enezithuba ezine inendawo yokuxhoma ebangeni elingaphandle, iipeyinti ezimhlophe ezipeyintiweyo, kunye nophahla lwasebukhosini. Iziphumo zinendawo ekuhlala kuyo igadi kuvula indawo yangaphandle.
Izimvo zeGazebo ziza ngeendlela ezahlukeneyo zoyilo. Uyilo olulula nolwanamhlanje lwe-gazebo lusebenzisa iintsika zelitye ezijikelezileyo, isitulo sangaphandle sokuthanda isofa, isileyiti sangaphandle, kunye nesixhobo sokukhanya kwesilayidi esihamba ngenjini embindini wesilingi.
Le patio ephahleni ifanelekile kwimicimbi yokutya ye-fresco kunye nokutya umntu onokufuna ukuzonwabisa xa enandipha isibhakabhaka sangaphandle. Isilingi yeglasi ye-gazebo esetyenzisiweyo ilungele oku; inika abantu behleli kwindawo yokutyela yangaphandle ukuze bakwazi ukubona ngokucacileyo isibhakabhaka esingaphezulu.
Le patio yamatye ine-gazebo emhlophe emdaka kunye nemhlophe egcina ifanitshala yangaphandle eblue ngokulinganayo. Ukuziva ngokubanzi kwendawo kuyonwabisa kwaye kwamkelekile.
Uyilo lwendabuko lwe-Victorian lwe-gazebo lusebenzisa umthi omhlophe, i-shingles ye-wood, kunye ne-ballusters ezininzi ezincinci ukwenza indawo eyakhiwe yomthunzi ehleliweyo, enesitayile, kwaye eyamkelekileyo.
Ukuqaqamba okumibalabala kwemyezo wegadi yasemaphandleni zisebenzisa ngokukuko izinto zobume bomhlaba ukuphucula amava esithuba sangaphandle. Iibhloko zeendlela zebhloko kunye nebhulorho encinci eyenziwe ngomthi yenza indlela eya kwigazebo entle ngasemva. Izihlalo ezakhiweyo, ii-ferns ezintle, kunye nezityalo ezinamanzi zisetyenziswe kwesi sithuba.
Le ngasemva inee-gazebos ezintathu zangaphandle ezisebenza ngeenjongo ezahlukeneyo. Enye inezindlu zebhafu eshushu yobuqu ngelixa yesibini ileyokuhlala kwindawo entle yokuphumeza injongo. Okwesithathu, i-gazebo ephambili ebekwe embindini yi-pergola gazebo emhlophe ekwahlala nefanitshala yezihlalo ezahlukeneyo ukuze zisetyenziswe.
Ezi zakhiwo zimbini ze-gazebo zinezithuba ezilula ezenziwe ngomthi ezihlala kwiziseko zamatye. Eyona nto iphambili kuyo luphahla oluqaqambileyo olu-orenji lodaka oluhambelana nesitayile sophahla olubonwe kwindlu ephambili.
Ileta eya kumtshakazi evela kumolokazana
I-Gazebos kunye ne-pergolas zihlala zisebenza njengeendawo ekugxilwe kuzo kwiindawo ezingaphandle. Le ngasemva inendawo yengca ebanzi, inyathela ngamatye, kunye nomthombo wamanzi amancinci. I-gazebo esetyenzisiweyo kunye ne-pergola zizinto ezilula ezenziwe ngomthi ezigcina umva wasemva uzive ukhululekile kwaye uhlala kakhulu.
Kwinqanaba eliphezulu lombala, i-octagon ye-octagon gazebo kolu luyilo ime kwinduli ehleliweyo kwaye inombono omnandi wedama lokuqubha elingasemva kwendlu.
Indawo yokubhukuda esemva kwendlu enesitayile sobuhle saseMeditera kunye nekholam yegazebos yaseKorinte-enye inezindlu zetafile zangaphandle kunye neseti yezihlalo kwaye enye yi-gazebo ye-spa.
Uhlobo loyilo lweMeditera loyilo lunokubonwa kwiintsika zokugoba ze-octagonal gazebo kwesi sithuba. Iphuli yokudada, umthi wasebukhosini wokulima umhlaba, kunye neendawo zokuhlala kwigumbi lokuhlala zenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yokuphumla.
isipho somyeni kumtshakazi ngosuku lomtshato
Amachibi egazi asechibini afana neli lihlala lisebenza ngeenjongo ezimbini. Ngaphandle kokuba yindawo enomthunzi yokuphumla kunye ne-lounging, ikwasebenza njengendawo yokungena echibini lenkonzo / igumbi lempompo, mhlawumbi.
Le gazebo yecala lokubhukuda elisecaleni linophahla oluhle olunemigca eneekholamu zomthi eziveziweyo, imiqadi kunye nemiqadi. Kunye nokusetyenziswa kweentsika zelitye lomlambo, ukusetyenziswa kwesithando somlilo ngaphandle kunika indawo ubushushu obongezelelekileyo kunye noxolo.
Eli chibi lokuqubha line-gazebo esechibini enophahla lwentsimbi, amacala amhlophe, kunye neentsika ezingqukuva ezimhlophe ezingqukuva. Indawo yebar ibekwe kwi-gazebo kwaye inika abasebenzisi indawo ephezulu kunye nebala yokusela kunye nokuzonwabisa.
Amanzi amabini amahle ajikeleze eli chibi-ngaphambili, ngaselunxwemeni, i-gazebo yophahla lwase-Spain. Igcina indawo yotshintsho phakathi kwamacala amabini echibi. Umgangatho wayo ophakamileyo unika abasebenzisi umbono omnandi wechibi kunye nephuli yangasemva.
Uyilo oluyingqayizivele lwe-gazebo aludityaniswanga ecaleni kwechibi, kodwa ngaphakathi kwalo. Ihlala ibha yenqanaba leephuli kwaye yakha ngaphakathi ukubhukuda izitulo zebar phambi kwayo.
Le gadi yetropiki ngumzekelo owahlukileyo woyilo lwembonakalo-inemizila yamatye ejijekileyo edanisa ijikeleze amachibi adibeneyo. Embindini wayo yonke kukho i-gazebo emhlophe, efikeleleka kuphela nge-arch yomdiliya kunye negadi encinci ye-rose.
Eli phuli lokudada kunye nendibaniselwano yoyilo lwesiko le-gazebo lenziwe ngendlela entle nangobabalo. Inkangeleko emnyama yentsimbi eyenziwe nge-gazebo ngumahluko omangalisayo kwilitye elimhlophe leentsika zangasemva kunye neechibi.
Umzekelo ovulekileyo, otshisa kakhulu uyilo lwasemva kwendlu, esi sithuba sangaphandle sisebenzisa iphuli enkulu engaphantsi kwetropiki eyahlula iiplanga ezimbini zamachibi. Kwikona yepropathi, sine-gazebo yetropiki yaseAsia eneentsika zayo zomthi, uphahla olushushu lwetropiki, kunye neendawo zokuhlala ezihlala zinika umsebenzisi umbono omangalisayo ngamasimi, imithi yesundu, nolwandle mgama.
Uyilo lwangaphandle lweGalari onokuyithanda:
Uyilo lweGazebo - Iingcamango ezingama-65 zePatio Design - Iingcamango ezingama-50 zeDisk Design - Iingcamango zangaphandle zomlilo - Iingcamango zamanzi
ndiyakuthanda iikowuti ezininzi kuye
Uluhlu lokutshekisha lomtshato lwabafoti
amagama amabini okugqibela ngaphandle kweqhenqa
izipho zamadoda ngosuku lomtshato